Kunzwisisa UAE gweta Retainer Fees uye Legal Services. 0
Nyaya Yemari Inobhadhara
Kuuraya netsaona kana kuuraya
Bhasiketi kana Dhudhudhu Tsaona
Bhizinesi Mutemo / Kugadzirisa Kupokana
Kunzwisisa Basics yeUAE gweta Retainer Fees uye Legal Services.
1 Comment	/ atoni, Bhizimisi Mutemo, mafemu emutemo / By Sarah
UAE gweta Retainer Fees uye ZveMutemo Services
Gweta rinofanirwa kuve rako rekutanga rekubata nenyaya dzese dzemutemo dzauinadzo; vanoziva kupinda nekunze kwemutemo. Asi chii chinonzi mari yekuchengetedza? Uye chii chaunoda kuti uzive nezve mabasa epamutemo muDubai, Abu Dhabi, nedzimwe Emirates? Wauya kurudyi kunzvimbo mhinduro.
Pane imwe nguva mune zvebhizinesi kana zvemunhu mamiriro, kana mutengi wako kana vanopa rubatsiro votyisidzira kufonera gweta ravo chero nyaya yepamutemo, Saka unogona kunge uine gweta kana kambani yemagweta "pane chengetedzo." Kuve negweta pane chengetedzo zvinoreva kuti mutengi wako anobhadhara gweta reUAE mari shoma yemari nguva dzose. Mukudzoka, mumiriri anoita mamwe mabasa epamutemo kana kuraira kwezvemutemo pese paunoda rubatsiro rwavo. Ndiyo dudziro inoreva kana dudziro yedudziro.
Kuva neVachengeti kunonyanya kubatsira kumabhizinesi anoda basa repamutemo nguva dzose asi vasina mari yakakwana yekuhaya gweta reDubai yakazara nguva.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ndirini chaizvo paunofanira kutaura negweta. Asi usati waita izvi, unofanirwa kuve nechokwadi kuti une nyaya. Nekudaro, pachave nenguva zhinji iwe paunogona kunge usina chokwadi, uye zvakanaka chose kubvunza imwe. Asi unofanira kuva nechinhu chimwe chete mupfungwa dzako; zvakakosha kuti ushandire pamwe negweta rako uye nekuvimba naye. Vese mutengi uye gweta vanofanirwa kushanda sechikwata kana vachishuvira kuwana mibairo yakanaka.
Chii chinonzi muripo wekubhadhara?
Izvi zvinogona kudaidzwa zviri nyore inodzokororwa kubhadhara kunoitwa pamasevhisi egweta. Inopa pfungwa yekuvimba kugweta kuti vachazobhadharirwa masevhisi avo. Anochengeta kwenguva yakareba sei? Vanochengeta Makondirakiti anogara kwegore.
Mari inodzoreredzwa uye iyo UAE
Iyo UAE ndiyo imwe yenzvimbo huru iyo akanakisisa emutemo mafemu zviripo. Iwe uchawana akanakisa emitemo mafemu kubva kumatunhu ese epasi kuvhura hofisi kana maviri mune ino chikamu chenyika zvakare. Sezvingatarisirwa ipapo, mitengo yacho ichave yakakwira zvakare. Mari yekuchengeta chimwe chinhu icho magweta eUAE ari akatsiga pakuve nacho. Kunyangwe iwe uchigona kuwana nzvimbo zhinji dzingave dzisingaite zvirevo zvakadaro, vazhinji vanoona kuti mari iyi inobhadharwa pasati paitwa chero rubatsiro. Magweta evamwe vanobhadharisa zvakanyanya, achiteverwa nevakuru. Nekudaro, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kunyangwe avo vangori magweta vabatsiri vanobhadharisa inokwana shoma mari.
Mazhinji makambani anovimbisa kujeka zvachose, uye ndosaka vatengi vasingatyi kuita mari iyi. Tsanangudzo dzakajeka dzinopihwa kuti mari ichaenda kupi uye kuti ichashandiswa sei. Kana imwe mari yekuwedzera ikamuka mune chero mamiriro ezvinhu, vatengi vanoudzwa munguva uye vanopihwa zvakadzama zvikonzero.
UAE inopa sarudzo dzekuwana kuti mutengi angabhadhara zvakadii kuchengetedza mabasa egweta. Izvo zvinhu zvekutarisa zvine chekuita nekuchengeta fizi muUAE zvakatemwa uye neawa zviyero, iyo yekuchengetedza uye yekukwereta fizi, uye Mari inoenderana nenyaya yemhando. Hwaro hwekubhadhara kwemubhadharo wevachengeti ndeyemubhadharo weinotevera:
Tnzira yakashandiswa negweta,
Kuomarara kwenyaya yacho;
Chikamu chemutemo panowanikwa nyaya; uye
zvakakosha hunyanzvi hwakagadzwa negweta kuburikidza neruzivo.
Makesi akaomarara angangoda kutariswa zvakanyanya, uye mhosva dzacho dzinowedzera mumamiriro akadaro.
Zviite nenzira kwayo: Sangana neMutemo Wako.
Iko kunogara kune nzira chaiyo uye isiri nzira yekuita zvinhu. Unofanira kugara uchisangana negweta rako kamwe chete usati wafunga kuti anofanira kubata nyaya yako here kana kuti kwete. Hazvina basa kuti mese muve shamwari, asi mutengi uye gweta vanofanirwa kuwirirana. Kusangana negweta rako kunokutendera iwe negweta kuti munzwisise mumwe uye mumwe uye nekuvimbika kuona kuti kushanda pamwe kunogoneka here kana kuti kwete.
Kumhan'ara kunowanzoita kunge kuchidhura, uye haudi kuzviwana uri mumamiriro ekuti iwe watobhadhara iyo yekuchengetedza fizi uye unosema gweta rako kana usamutende zvakakwana kuti agadzirise nyaya yako. Usakanganwa kumubhadhara iye awa yaari kukupa iwe.
Kana mumwe munhu akakuudza kuti kutaurirana neepamusoro-notch mafemu emutemo, kunyanya munzvimbo yakaita seUAE haisi sarudzo, vabvunze kuti vafunge zvakare. Iwe unogona kugara uchivaudza izvo zvaunogona kupa uye teerera kune izvo zvavanofanira kutaura. Pachave nevazhinji vanozove nevatengi vakaringana mudungwe uye voti kwete kune chero munhu anopa peni pazasi pechavo chiyero. Asi zvekare, vamwe vane tsitsi uye vanoda kukura. Vangabvuma kupihwa kwakaderera uye vafare nezvazvo.
Kutsvaga Gweta Rakanaka Rekuchengetedza muUAE
UAE ine makambani mazhinji makuru anoitika kuve akanakisa pasirese. Makambani emutemo ari kupa mabasa epamutemo kuburikidza nemagweta ari etsika dzakasiyana siyana uye nharaunda. Ivo vakasanoshongedzerwa neruzivo rwematunhu mazhinji. Kutsvaga gweta rakanaka muUAE hachisi chinhu chikuru. Kana homwe dzako dzakwana, iwe unozochengetwa zvakanaka kwazvo. Iwe zvakare uchawana magweta mazhinji kubva kwakasiyana mamiriro uye nekuziva matauriro muchiArabic zvakanaka.
Bvunza mibvunzo yakawanda uye edza kutaurira seti yako yezvinhu zvakadzama kuitira kuti gweta rinyatso kuziva zvese zvisati zvaitika. Kana nyaya yacho yaenderera mberi, chero kushamisika hakugamuchire aya mafemu emutemo muDubai muAFA.
Yakakodzera mutemo rairo: izvo zviripo muDubai?
Mamwe makambani akanaka muUAE ari kuda kuwedzera ruzivo rwavo kune avo vatsva kunyika yemutemo uye vangangodaro vasina mari mumaoko avo nekukasira. Vanobvumidza vatengi kuti vagovane zvavo nhamo uye vanokurukura zvese zvakadzama kuitira kuti vagone kuziva kana ivo vaine chikumbiro kana kwete. Kana izvi zvangoitwa, ivo vanogona ipapo kuvaraira kuti vahaye gweta rakakodzera uye votovatungamira maererano nemitengo inoenderana nezvose izvi.
Kumbira iwe kuti utitumire zvako zvido zveChengetedzo Chibvumirano na nekudzvanya pano kana Kukumbira musangano kuti tikurukure zvimwe.
1 yakafunga nezve "Kunzwisisa Hwaro hweMagweta eUAE Retainer Fees uye Legal Services."
February 6, 2018 pana 10: 37 pm
Ini ndine gakava nemugadziri wekuti ndiani anofanira kubhadhara VAT. Inotevera chikamu chidimbu chechokwadi chemhosva:
Ini ndakaverengera muhotera mukamuri unit off chirongwa pamwe nekuvandudza muna Chikunguru 2014.
Fomu Rokuchengetedza rakasainwa nevose mapato.
Fomu racho raidudza mutengo, chirongwa chekubhadhara uye yakakodzera ruzivo rweyuniti.
Fomu racho rakanyarara paVAT.
Ndakanga ndatanga kubhadhara sey purogiramu.
Zvichakadaro, uye nanhasi hapana kunyoreswa kunoitwa neDLD, sezvo pasina kusainiwa SPA kwakarongwa.
Ndakagamuchira gwaro re SPA musi waNdira 21, 2018. Pane mamwe mamiriro ezvinhu ari mumakakatanwa uye ari kutaurwa.
Gwaro chete rakabvumiranwa kusvika-nhasi iri rakasainwa Fomu Rokuchengetedza iro richiri rakanyarara paVAT. Ini ndinonzwisisa kuti musimudziri aifanira kunge akataurirana neni pamberi paNdira 01, 2018 pamutengo wakataurwa imomo, izvo zvausina kuita uye mutengo muReservation Fomu inotsigira, saizvozvo.
Anokudziridza haafungi kuita Mutemo wemitemo wakatemerwa mumutemo weVAT uye achisimbirira kuti VAT inyaya yemutengi.
Chechipiri, musimudziri ari kundikumbira kuti ndiitumire kwariri Fee yekuNyoresa neDLD, nekukasira, zvikasadaro kuchave nechirango uye ini ndinenge ndine mhosva yekubhadhara chirango. Iri kureva chiziviso cheDLD nezve nguva yakatarwa yekunyoresa yemusi wa25 Chikumi 2015 muchiArabic (kopi yakasungirirwa). Ini ndinonzwisisa kuti zuva reSPA rakasainwa rinozotarisirwa sezuva rekutenga rekuverenga mazuva ekunonoka kuita chikumbiro chekunyoresa neDLD.
(Contd. Iri papeji 2 of 2)
Tora apa ..
5 Mhando dzeCriminal Law Cases muDubai uye Sei Gweta Rinogona Kukubatsira Iwe
Kunwa uye Kutyaira Mitemo muDubai kana UAE: Vanotyaira Vanofanira Kuteerera neMutemo kuti vadzivise Kurangwa Kwakasimba.
4 Zvikonzero Nei Uchifanira Kujairwa Nemapurisa Akajairwa: Matipi Ekuchengetedza eVafambi Ekudzivirira Anogona Kusungwa Vasati Vashanyira Dubai kana iyo UAE panguva yeCOVID-19.
Iyo Yakanakisa Nzira Yekumutemo Kudzoreredza Kubva Patsaona: 8 Matipi Ekutora Mushure me Tsaona
Yakawanda Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo Nezve Mari Kubiridzira kana Hawala muUAE: Ndichasangana nePenal Action?
Kukosha kweZano reMutemo muZvibvumirano zvebhizinesi muDubai, UAE 00000 | Mutemo Makambani Dubai on Kushandiswa kweMitemo Yekunze uye Dhivhiti Kugadziriswa muAFA. Zvaunoda kuziva.
Ann on Chii chinoitika kana ukasabhadhara chikwereti kana kiredhiti kiredhiti mukaka ku UAE?
Juanitah Ntambi Anokosha on 5 Mhando dzeCriminal Law Cases muDubai uye Sei Gweta Rinogona Kukubatsira Iwe
Legalbridge-admin on Zvikamu zveAssault Case
Ashley on Zvikamu zveAssault Case
Magweta Matsotsi MuDubai
mafemu emutemo muDubai
Visa Mirairo uye Mitemo